Home » Vaovao momba ny dia an-kolontsaina » Matin'ny mosary any Thailand ny elefanta ary manome tsiny ny fizahan-tany
Ankoatry ny olona, ​​ny elefanta dia miady mba ho tafavoaka velona. Marina izany any amin'ireo tanàna fialantsasatra toa an'i Pattaya, Thailand.
Ny fiverenan'ireo mpizahatany any Thailand dia tsy natomboka noho ny krizy COVID-19 mitohy
Ny elefanta ao Thailand dia mahasarika mpizahatany matetika
Ny elefanta dia mosarena ary marary ao Pattaya noho ny indostrian'ny fizahan-tany izay matetika tsy miteraka fidiram-bola
Malemy loatra ka tsy mahazaka, Elefanta ao an-tanànan'i Pattaya any Thailandy, dia tsaboina amin'ny tsiranoka miverimberina sy fanafody amin'ny aretin-koditra satria natory ela be tamin'ny lafiny iray izy ireo.
Tsy misy mpizahatany midika hoe tsy misy vola miditra amin'ny fitoerana masina. Tsy misy vola dia midika fa tsy misy sakafo ho an'ny elefanta. Manodidina ny $ 60 isan'andro ny famahanana elefanta any Thailand.
Araka ny tatitra iray tao amin'ny Pattaya Mail, mpitsabo biby iray Phadet Siridamrong, tompon'ny Hopitaly Biby Nernplubwan, dia namaly ny Krating Lai Elephant Garden 12 feb taorian'ny tsy nahajoro i Khunpan, 50 taona. Nilaza izy fa tsy ampy mihinana ny elefanta ary nanjary nalemy loatra.
Narary ihany koa ny elefanta ary nantsoina vonjy ny Fikambanana Alliance Elephant Alliance Thai. Ny alliance dia afaka nikarakara pachyderm marary avy tao amin'ny toby mba hafindra tany amin'ny hopitaly elefanta manam-pahaizana manokana any Surin.
Ny firenena famantarana of Thailand, elefanta dia mendri-piderana amin'ny heriny, fiaretany ary faharanitan-tsainy. Efa ela izy ireo no nandray anjara Thai fiaraha-monina; elefanta dia nampiasaina tamin'ny ady taonjato maro lasa izay, ary nanangona hazo sy vokatra avy tany an-tsaha koa izy ireo.
Mety ho toy izany ihany koa ny toe-javatra any amin'ny faritra hafa amin'ny fanjakana.
Horohoron-tany hafa indray no namely ny morontsirak'i Japon